DAAWO SAWIRO:- Ninkii ka dambeeyay weerarkii magaalada Nice oo la aqoonsaday – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DAAWO SAWIRO:- Ninkii ka dambeeyay weerarkii magaalada Nice oo la aqoonsaday
Inkastoo ciidanka booliska dalka Faransiiska aysan weli xaqiijin shaqsiga dhabta ah ee ka dambeeyay weerarka dhiiga badan ku daatay ee magaalada Nice, ayaa hadana warbaahinta Faransiiska waxay shaacisay shaqsigaas wuxuu yahay iyo halka uu kasoo jeedo.
Warbaahinta dalka Faransiiska ayaa sheegtay in weerarkaasi uu qaaday nin 31 sano jir ah oo asalkiisu yahay Tunisia, kaas oo hore ciidanka booliska ee dalkaasi ay u garanayeen oo kiisas dhex mareen, balse aan lala xiriirin weli kooxaha Islaamiyiinta ah.
Waxaa ninkaan magaciisa lagu sheegay Mohamed Lahouaiej Bouhlel, waxaana la sheegay inuu yahay nin leh xaas iyo saddex caruur ah.
Gaariga uu ninkaan weerarka ku geystay ayaa laga dhex helay waraaqo iyo dukumentiyo muujinaya inuu yahay nin Franch-Tunisian ah oo ku noolaa magaalada uu weerarka ka geystay ee Nice.
Waxaa markii hore loo maleynayay inuu gaariga xakameyn waayay ama farriinkii uu goostay, balse markii dambe ayaa waxaa cadaatay inuu si ula kac ah dadka ugu laayay, wuxuuna u muuqday nin ku faraxsan waxa uu sameeynayay, sida uu sheegay mid ka mid ah dadkii bad-baaday.
Dhinaca kale, weerarkaasi ayaa sida haatan la xaqiijiyay ku geeriyootay ku dhawaad 90 qof, waxaana sidoo kale ku dhaawacantay in ka badan 100 kale, iyadoona 18 ka mid ah dadkaasi dhaawaca ah ay ku jiraan xaalad halis ah.